LEGO Collectible Minifigures 71029 စီးရီး ၂၁ ကိုသေတ္တာ ၃၆ ခုမှာတွေ့ရမယ်
03 / 12 / 2020 03 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 809 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 21, Lego
အရေအတွက် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား တစ်ခုတည်း box ထဲမှာ 60 ကနေ 36 ကနေလျှော့ချလိမ့်မည် အသက် 71029 စီးရီး 21.
အဆိုပါ အသစ်ထုတ်ဖော်ဌန် ဇာတ်ကောင် ၁၂ လုံးသာပါဝင်သည်။ ထိုအရေအတွက်သည်နှစ်များအတွင်းအတက်အကျရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် ၁၆ ၏စံသတ်မှတ်ချက်ထက်လေးဆနည်းသည်။ 12 ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Fantastic Beasts Series 1 သည် ante ကို 22 minifigures အထိတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး Team GB Minifigures သည်ဇာတ်ကောင်ကိုးခုအတွက်သာအရာရာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သည်။
ပေးကပြောသည် အသက် 71029 စီးရီး 21 လိုင်စင်ရခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်ဖျားစီးရီးဖြစ်ခြင်းထက်အဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် - သင်သည်ရှေ့သို့သွားသောစံသည် ၁၂ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထိုစိတျထဲတှငျနှင့်အတူ Lego အုပ်စုသည်ပုံသေကိုက်ညီရန်သေတ္တာအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အမှုတစ်ခုစီအတွက်အသေးအဖွဲ ၆၀ ပါသောထုံးစံအတိုင်းရောစပ်မည့်အစား Series 60 minifigures တွင်ဘူးသီးအိတ် ၃၆ ပါရှိသည်။
၁၂ ကို ၃၆ သို့ ၃ ဆသွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့သင်ဟာသင်္ချာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ Allen မှပြောကြားချက်အရသို့သော်မှော်ကဲ့သို့ပင်အမှုတစ်ခုစီသည်ပြည့်စုံသည့်စီးရီး ၃ ခုအတိအကျပါလိမ့်မည် အဆိုပါအုတ်ဝါသနာရှင်.
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ရပ်များကိုအယ်လင်သတိပြုမိသည် Lego အုပ်စုသည်မညီမညာဖြစ်နေသောဖြန့်ဝေမှုရှိနိုင်သည်။ အများစုအတွက်တော့သေတ္တာတစ်လုံးကသင့်ကိုပြည့်စုံစုံသုံးစုံကိုအိတ်ထဲထည့်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူသုံး ဦး အကြားအမှုတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ရှုပ်စေသောအရာအားပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလားအလာဖြစ်စေသည် - စartသင်ယခုလုပ်ချင်သောနောက်ဆုံးအရာသည်စတိုးဆိုင်ထဲတွင်အိတ်များခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျသူတို့ကိုမတွေ့ရသေးပါလျှင်, ဒီမှာပါဝင်သည်ဇာတ်ကောင်စာရင်းအပြည့်အစုံပါပဲ စုဆောင်းထားသောအသေးစား အသက် 71029 စီးရီး 21: Jaguar Warrior၊ အာကာသရဲ၊ Violinist Boy၊ Alien Crook၊ Centaur အမျိုးသမီး၊ ပျားမွေးမြူသူ၊ Ladybug မိန်းကလေး၊ Pug ဝတ်စုံကလေး၊
← Mark Hamill သည်လုိုကို LEGO တွင်မပြောသောကြောင့်ဒီနေရာတွင်ဖြစ်သည် Star Wars အားလပ်ရက်အထူး
LEGO Technic 42122 Jeep Wrangler ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် →